अनारको पातको सेवनले यस्तो रोगसँग लड्ने शक्ति मिल्छ, कसरी गर्ने सेवन ? - नेपाली खोज
अनारको पातको सेवनले यस्तो रोगसँग लड्ने शक्ति मिल्छ, कसरी गर्ने सेवन ?
काठमाडौं । फलफुलहरुमा अनारको छुट्टै महत्व छ । हिजोआज अधिकांश फलफुलमा विषदीको प्रयोग बढीरहेका बेला अनारमा भने विषादी हाल्न नमिल्ने भएका कारण यो विषादी रहित फलफुल हो । अनार स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिन्छ । यसको सेवन प्राय मानिसहरुले गरेका हुन्छन् । अनारको स्वाद गुलियो हुन्छ ।
यसको सेवन गर्दा भिभिन्न रोगबाट मुक्त हुन् सकिन्छ । धेरै मानिसहरुलाई थाहा छैन होला अनार सेवन गर्दा कति फाइदा हुन्छ भनेर गर्मी महिनामा यसको धेरै सेवन हुन्छ ।
अनार खानाले रगतको कमी हुन नदिनको साथै अनारको जुस पिउँदा तन्दुरुस्ती प्राप्त हुनुका साथै रक्त सञ्चालन प्रक्रियालाई फाइदा गर्छ ।अनारको नियमित सेवनले छाला चम्किलो बनाउनका साथै दाँतसम्बन्धी समस्या बाट छुटकारा मिल्छ ।अनारमा पाइने एन्टिअक्सिडेन्टले रगतमा ग्लुकोजको मात्रा नियन्त्रण गर्छ ।
त्यसैले, मधुमेहका बिरामीका लागि अनार लाभदायक छ । अनारले शरीरमा हुने विकारयुक्त वस्तु बाहिर निकाल्न सहयोग गर्छ । साथै, प्रतिरक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउँछ ।अनार मात्र नभई मानव शरीरको लागि अनारको पात समेत धेरै फाइदाजनक हुने विभिन्न अनुसन्धानहरुले देखाएका छन्।
आरडिटी पोजेटिभको पिसिआर नेगेटिभ